Rabshado ka dhashay Xafladii Somaliland ee Holland [Sawiro] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Rabshado ka dhashay Xafladii Somaliland ee Holland [Sawiro]
Rabshado ka dhashay Xafladii Somaliland ee Holland [Sawiro]
Posted: Khalid Yusuf - May 19, 2013
Ciidamada Booliiska oo boqolaal gaaraya ayaa xaflada soo gaaray kadib markii rabshado ka bilowday dhalinyaro xaflada dhexdeeda ku dagaalantay ay ka dhasheen dhaawacyo, waxaana goobta soo gaaray gaadiidka gurmadka caafimaadka ee Ambalance.
Booliiska ayaa ku khasbay dhamaan dadkii xafladaasi ka qeyb galay inay halkaasi isaga baxaan isla markaana joojiyey gebi ahaan xafladii halkaasi ka socotay.
Dadkii xaflada laga soo saaray ayaa diiday markii danbe inay ka kala tagaan goobta xaflada ka dhaceysay nawaaxigeeda, iyagoo halkaasi muddo dheer taagnaa.
Booliiska oo isku dayey inuu dadkaasi kala diro ayaa xir xiray qaar kamid ah dadkii halkaasi taagnaa markii ay ka horyimaadeen amarka Booliiska, halka la sheegay mid kamid ah Soomaalidii halkaasi joogay uu Gitaarad madaxa uga dhuftay mid kamid ah askarta taasi oo keentay in ciidamada iyaguna awood adeegsadaan.
Waxay ahayd markii ugu horeysay oo ciidamo tiro intaas la eg loogu yeero xalad ay dhiganayeen jaaliyada Soomaalida, waxayna xafladan ahayd tii ugu weyneyd ee lagu xusayey 18ka May oo sanadkan ka dhacda dalka Holland.
Xafladan ayey sidoo kale ku sugnaayeen Soomaali kale oo ka kala timid dalalka Jaarka la ah Holland gaar ahaan Germany iyo Belguim.
Booliiska ayaa xaqiijiyey inay xireen sadex qof oo labo kamid ah lagu tuhmayo inay yihiin raggii halkaasi dagaallka ka bilaabay inay ahaayeen waxaana da’adooda lagu sheegay 19 iyo 22 jir. Halka ninka sadexaad oo lagu sheegay 38 sano jir loo heysto inuu weerar ku qaaday ciidamada Booliiska.